I-Moscow International Film Festival 2015: amafilimu, abawinile, imiklomelo
June 19, 2015 UMoscow ulindele isenzakalo esiyingqopha-mlando - sizovula iminyango yawo 37 Umkhosi Wamafilimu Emhlabeni Wonke waseMoscow. Lo mcimbi uphakathi kokulindelwe kakhulu hhayi kuphela eRussia, kodwa emhlabeni wonke, ngoba umkhosi awuthandwa kakhulu kunaseCannes, eBerlin noma eVenetian. Ngesonto lokuvula sizokutshela ngomlando walomkhosi we-cinema ubuciko, mayelana nokuthi ubani oqokelwe ukuthi umklomelo, ngubani okutholakele nokumangala okungalindelwa.
Umlando weMidlalo Yomfilimu yaseMoscow
Umlando walo uqala ngo-1935. Khona-ke usihlalo wejaji - uSergei Eisenstein wakwazi ukuqoqa amafilimu okuncintisana avela emazweni angu-21. Indawo yokuqala yanikezwa amafilimu aseSoviet - Chapaev, Youth of Maxim, Abalimi. Kodwa i-cartoon ye-Walt Disney evelele yayisendaweni yesithathu.
Ngesikhathi esilandelayo i-MIFF yayibanjwe ngo-1959 kuphela, leso sinyathelo sasiyi-Ekaterina Furtseva.
I-Moscow Film Festival 2016: izingubo
Kusukela ngo-1999, lo mcimbi uye waba umcimbi waminyaka yonke. Naphezu kwenkinga enkulu eminyakeni engu-90, ukunciphisa imali nokunciphisa inani labahlanganyeli, umkhosi wefilimu wakwazi ukuqhubeka uphila. Manje usekelwa ngokuqinile nguhulumeni waseRussia. Umcimbi uheha ukunakekelwa kwamazwe ngamazwe, futhi abakhiqizi befilimu abaningi abaphupha ngesithombe sika "Saint George".
Eminyakeni engaphezu kwengu-10, umqondisi unomphela womkhosi wefilimu nguNikita Mikhalkov, noNatalika Semina, umqondisi jikelele. Ngo-2015, ijaji lizobe liholwa ngumqondisi waseRussia uGleb Panfilov.
Ikhomishana Yezokukhethwa yabuye yavuselelwa ngo-2015, manje ihlanganisa abahlaziyi beRussia nabamazwe ngamazwe. U-Andrey Plakhov uba ngumongameli.
Abaphumelele eMnyangweni Wefilimu YaseMoscow 2016
Ijaji, kanye nesimiso somkhosi wamafilimu angu-37, uzokwaziwa ekuqaleni kuka-Juni. Imininingwane ongayithola kuwebhusayithi esemthethweni: http://www.moscowfilmfestival.ru/
Ngo-2014, ijaji lahlanganisa umlingisi waseJalimane uFrancesca Petri, umqondisi waseMoor u-Abderahman Sissako, umqondisi waseGeorge Levan Koguashvili nomlimi waseFrance uLaurent Danil.
Imiklomelo nemiklomelo yoMkhosi weMouscow wamaMoscow
Uphawu lweMicrosoft Film Festival lwaluyisigcawu se "Saint George". Kufanele kuqaphele ukuthi ngo-2014 kwaguqulwa. Ngaphandle kokubukeka kwangaphandle kusetshenziswe njengesigugu se-Virtuti eqinile - uManuel Carrera Cordon.
Manje lokhu kuwumsebenzi wangempela wezobuciko: ngesisekelo semarble eluhlaza sibona ikholomu ehlelwe kahle, ekhonjiswe ngomfanekiso wesigcawu somuntu oshaya isitha. Ukumboza i-statuette yigolide eliphakeme kakhulu. Umklomelo omkhulu womncintiswano omkhulu unikezwa ifilimu engcono kakhulu.
Izingubo zoMkhosi wamaFilimu wamazwe omhlaba waseMoscow 2016
Ngaphezu kwalokho, kunezinye iziphakamiso:
Indima eyindoda engcono kakhulu.
Indima engcono kakhulu yabesifazane.
Umklomelo okhethekile weJury.
Ifilimu emfushane kakhulu.
I-documentary engcono kakhulu.
Umklomelo okhethekile unikezwa ngempumelelo evelele ekuthuthukiseni ukusebenza nokuqondisa amakhono. Izinikezelwe enkumbulo yeStanislavsky omkhulu, ibizwa ngokuthi: "Ngiyakholwa. Konstantin Stanislavsky ».
Imuphi amafilimu angabamba iqhaza eMnyangweni we-Film wamaMoscow?
Ngaphakathi kohlaka lwe-International Moscow Film Festival, kunezindawo eziningana eziyinhloko, okungukuthi:
Ukuncintisana kwamafilimu amfisha.
Ukubonisa okungaphandle kokuncintisana.
Isibonisi esivela emuva.
Uhlelo lwe-cinema yaseRussia.
Izidingo zokudweba okubambe iqhaza ngo-2015 azishintshiwe. Azinzima kakhulu:
Isithombe kufanele sibe ubude obugcwele (ngaphandle kohlelo lwefilimu elifushane).
Ifilimu ithulwe ngolimi lokuqala, kodwa liphindwe kabili ngosizo lwemibhalo engezansi zesiNgisi.
Ifilimu akufanele isakazwe ngaphambilini ensimini ye-Russian Federation.
Okuthandayo kunikezwa kumaveliveli.
Phakathi nenkinga yezomnotho, lapho ukusetshenziswa kukahulumeni kwehlelwa ngo-10%, imali eyabelwe ukuphatha i-MIFF-2015 yahlala ingalingani futhi yafinyelela kuma-ruble ayizigidi ezingu-115. Noma kunjalo, ngokusho komqondisi womkhosi - uKirill Rogozov, le mali ayanele ngokwanele ukuqhuba uhlelo lokuncintisana ngokugcwele, njengoba kwakunjalo eminyakeni edlule. U-Nikita Mikhalkov ufuna abaxhasi ngobuqotho. Kodwa kungenzeka ukuthi isabelo seminikelo sizokwehla kakhulu. Umphumela - umkhosi uzoba mfushane ngezinsuku ezimbili, futhi amafilimu azoboniswa kancane. Masithemba ukuthi izinga lamabhayisikobho ngeke lithinte ukunciphisa kwezimali.
Uhlelo lwama-37 we-International Moscow Film Festival
Kusengaphambili ukukhuluma ngohlelo lomkhosi namafilimu athunyelwe emncintiswaneni, uzokwaziwa kuphela ekuqaleni kukaJuni.
Ngokwesiko, kunemincintiswano engu-3: amafilimu amakhulu, amancane nama-documentary. Ngo-2014, imidwebo engu-16 yabizwa ngemiklomelo yomncintiswano oyinhloko, kanti ngo-2015 - kuphela ngo-12 kuphela. Ngenhlanhla, inani lamafilimu edokhumenti alishintshanga, namanje. Ukunakwa okukhethekile kwababukeli bekulokhu kukhangwa uhlelo lwe "Free Thought". Abahleli bazama ukushiya ngokugcwele.
Naphezu kwayo yonke imizamo yomqondisi wamakhomishana, ukungabi nemali kwathinta inani lemisebenzi ehanjisiwe: inani labo lahlehla kusuka ku-250 kuya ku-150.
Izihambeli zomhlaba wonke
Ngokuqondene nesimo sezombangazwe e-Ukraine, ngokusungulwa kwezigwegwe zezomnotho ezivela eNtshonalanga neRussia, isimo sengqondo esilula kakhulu sabalingani bangaphandle sibheke eMnyangweni WezeMidlalo weMoscow International. Ngakho ngo-2014, ekuvuleni komkhosi, izivakashi zakwamanye amazwe azizange zivele. Ngisho noGerard Depardieu othandekayo wayengekho enye yezenzakalo ezibaluleke kakhulu zonyaka. Noma kunjalo, kuvulwa kwenzeka ezingeni eliphakeme kakhulu futhi wabutha bonke abadlali baseRussia, abakhiqizi, abaqondisi nabanye abantu abezindaba. Emibonisweni, ubona uB Brad Pitt.
Ngonyaka ka-2015, isimo sasiba nzima nakakhulu. Abahleli bomkhosi baqaphele ukuthi bameme osebenza nabo base-Ukraine nabaseWestern, kodwa noma ngabe bazobe bengakabonakali. Kuhlelwe ukuheha izinkampani zangaphandle ezizokwazi ukuqinisekisa ukuhlanganyela kwezithombe zangaphandle ohlelweni olungaphandle komncintiswano. Kuze kube manje azikho izimpendulo.
Indlela yokuya eMnyangweni we-International Moscow Film
Ukufika emkhosini akudingeki ukuba ube udumo emhlabeni wonke, okubaluleke kakhulu, isifiso. Inketho elula ukuthenga ithikithi. Yenza lokhu kusengaphambili, inani labo lilinganiselwe. Bheka izindawo ze-bilet2u noma i-biletservice, kodwa uzilungiselele ukuthi ithikithi eya embukisweni wokuvula uzokhokha inani elikhulu.
Ukubonisa ukuncintisana ukuze kube lula, ngoba amathikithi athengiswa ngokukhululekile ebhokisini lebhokisi. Uma ungazithengi kusengaphambili, uze ihora ngaphambi kokuba umcimbi, cishe, uzokwazi ukuthola indawo yamahhala ngentengo engabizi.
Yini enye eyaziwa yi-International Moscow Film Festival?
Ngisho nabantu abade kakhulu nobuciko bajabule ukubuka imikhosi yokuvulwa nokuvala eMnyangweni weMidlalo yaseMoscow. Ukuhamba kwezinkanyezi zaseRussia naseNtshonalanga ku-carpet ebomvu kuyindlela ehle kakhulu yokubonisa imfashini, kanye nethuba lokubonisa umhlaba umyeni wabo / umkami, izingane, njll. I-Paparazzi kanye nezilaleli ziyajabula ukubuka konke ukuhluleka nokunqoba kwekhabethe elibomvu. Ngakho ngo-2014 uRavshan Kurkova no-Anna Chipovskaya bazihlukanisa. Boba bobabili baba yindlela yokubonakalisa ubuhle nobuhle obuhle. Owokuqala ogqoke izindiza ezinokuzilibazisa ezigqoka isibhakabhaka-ohlaza okwesibhakabhaka, kanti owesibili - wakhetha izingubo zokugqoka ezinomsoco nge-accent esikhwameni.
Izisusa zokuhleba kwakuyizingubo ezibonakalayo zomfazi kaMarat Basharov - uCatherine Arkharova; igqoko elihle futhi elincane le-Anastasia Makeeva; u-Catherine Spitz no-Catherine Vilkova.
Kodwa ingubo exoxwa ngayo kakhulu kusihlwa kwakuwukugqoka "koboya" kaMaria Kozhevnikova. Isigqoko sokugqoka sasigcwele izinto ezingavamile, okuqala lapho kungabhekwa khona ubomvu. Eqinisweni, indlu yangasese ephuzi eluhlaza okwesibhakabhaka yayihlotshiswe ngezimpaphe. Kwabonakala kungavamile futhi kungavamile.
Sithemba ukuthi kulo nyaka izinkanyezi zizocabangela zonke iziphambeko zazo futhi zizokwazi ukuthola izinto ezifanelekayo nezinhle.
I-Moscow Film Festival iyisenzakalo esiyingqopha-mlando sesiko lesizwe. Naphezu kobunzima (ikakhulukazi zezezimali), i-cinema yaseRussia iyaqhubeka ihlala futhi ihlala ikhuphisana. Phakathi nenkinga kanye nobuhlobo obunzima bezopolitiki nezomnotho, izilaleli zaseRussia zidinga iholide, sinethemba lokuthi uzothola. Futhi yimaphi amafilimu ongathanda ukuwabona?
I-Junior Eurovision Song Contest Song: konke okujabulisayo
Uhlu lwezingqungquthela ezinhle zonyaka omusha zesikhathi sethu
Iholidi lama-Orthodox September 11 - Ukubhalwa kukaJohane uMbhapathizi
Schedrivky - umlando, amasiko, izinkolelo. Umbhalo wezinzuzo ezilimini zaseRussia nase-Ukraine
Isevisi ka-Easter: amasiko kanye nemikhosi yesonto ngePhasika
Ukukhethwa kwezinsimbi zomculo ezidabukisayo ngaphansi kwemizwelo edabukisayo
Ungadla kanjani kahle futhi uzuze umzimba?
Yenzani imidwebo yezingane?
Thola imfundo ephakeme nge-intanethi
I-Solarium: okungcono futhi okulimazayo
Indlela yokuqinisekisa umfana ukuthi uyamthanda?
Hamba kusuka e-napkin ngezandla zakho - ama-master master classes
Wedding of Nikita Presnyakov no-Alena Krasnova: izithombe ezingu-20 eziqhakazile namavidiyo ahlukile